ဘာအလုပ် မှ မပေးနိုင်တဲ့ ပြည်တော်ကြီး နဲ့ အမှောင်ဖုံးနေတဲ့ ပြည်တော်ပြန်များ ရဲ့ အနာဂတ် – Let Pan Daily
ဘာအလုပ် မှ မပေးနိုင်တဲ့ ပြည်တော်ကြီး နဲ့ အမှောင်ဖုံးနေတဲ့ ပြည်တော်ပြန်များ ရဲ့ အနာဂတ်
သိကြမှာပါ .. နိုင်ငံခြားမှာ မိသားစု ထဲက တယောက် အလုပ်လုပ်ရင် ထိုင်စားလို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အဖြစ်နဲ့ မှီခိုပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အခု Covid 19 ပြသနာဟာ ထမင်းလုပ်ကို ပုတ်ချလိုက်တဲ့ အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီလို နိုင်ငံတွေထဲ နိုင်ငံပေါင်းစုံ ပါဝင်တယ်။ အထူးသဖြင့် – မိသားစုဝင်တွေကို ရှာဖွေကျွေးမွေး တတ်တဲ့ စိတ်နဲ့နေတဲ့ ရိုးရာဓလေ့ကို အခြေခံတဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ လူမှုစီးပွားရေး အားနည်းတဲ့ ဆင်းရဲမှုနှုန်း များတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတွေများတယ်။
ဥပမာ ဖိလစ်ပိုင် တို့ အင်ဒိုတို့ ထိုင်း မြန်မာ အိန္ဒိယ ဘင်းဂလားဒေရှ့် စတဲ့ .. မိသားစုထဲက တယောက်ကို နိုင်ငံခြားပို့နိုင်ရင် မိဘတွေနဲ့ မှီခိုနေတဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို ရှာကျွေးလို့ရတယ် ဘဝအတွက် စားစရာခိုင်လာမည့် လို့ထင်ကြတဲ့ အဖြစ်နဲ့ နေနေတဲ့ နိုင်ငံတွေပေါ့။ အဲဒီနိုင်ငံတွေ က အများကြီး။ အာဖရိက တောင်အမေရိက အစုံ။ အလုပ်တွေလုပ် .. အိမ်ကို ထောက်ပံ့ပေးကြ ပေါ့။ အခုတော့ ပြသနာတွေဖြစ်နေကြပြီ။
တကယ်တန်း ရင်လေး စရာကောင်းတဲ့ တချက်ဟာ တဆင့်ပြီး တဆင့် တက်လာနိုင်တယ်။ ယနေ့ Trump လို American First ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ သူတို့နိုင်ငံသားတွေ အလုပ်ပြန်ရအောင် လုပ်ပြီးမှ အခြားနိုင်ငံသားတွေ ဦးစားပေးမည့် စိတ်တွေနဲ့ ဖြစ်လာမည့် နိုင်ငံတွေ များလာလိမ့်မယ်။ အရင်က အလုပ် ကို တတိယနိုင်ငံ တွေက လူတွေ လုပ်ပလေ့စေဆိုပြီး – သူတို့ မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေ ခိုင်းကြပေမယ့် အခုပြသနာက နောက်ပိုင်း အလုပ်မရှိရင် ရတဲ့ အလုပ်ဝင်လုပ်ကြရမည့် ကိန်းဖြစ်နေသလို .. လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ လုပ်သားခွဲဝေမှုအရ .. တတိယနိုင်ငံ ကလူတွေ ဖြုတ်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံက လူတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဖြစ်လာနိုင်တာပဲ။
ခံရတဲ့ လူတွေကတော့ .. ငါတို့ အလုပ်ပြုတ် ရတာ သူတို့နိုင်ငံသားတွေ ဦးစားပြန်ပေးလို့ ဆိုပြီး မြင်ကြလိမ့်မယ်။ တဖက်ကကြည့်ရင်လည်း မင်းတို့ အလုပ်ကို တတိယနိုင်ငံက လူတွေလာလုပ်မှ ဆိုပြီး ချေးများနေမယ့်အစား မင်းတို့ ဘာနဲ့ဆက်စားမှာလဲ .. နိုင်ငံက ငွေကြေးလည်ပတ်ဖို့ ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် လုပ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးဖြစ် လာနိုင်တယ်။
လတ်တလောတော့ အလုပ်တွေ ပြုတ်ကြ .. နောက် အိမ်မှာ ခေါ်ထားတဲ့ အိမ်ဖော်တောင် လခမပေးနိုင် လို့ အလုပ်ထပ်ဖြုတ်နဲ့ .. အဆင့်ဆင့် .. အလုပ်မလုပ်ရင် ဘာနဲ့ သွားစားမလဲဆိုတဲ့ ပြသနာ။ နောက် အလုပ်ပြုတ် – အလုပ်ပြန်ရှာမရနဲ့ ယခုလတ်တလော နာမည်တပ်ထားတဲ့ ပြည်တော်ပြန်တွေနဲ့ သူတို့ကို မှီခိုနေတဲ့ မိသားစု ဝင်တွေဟာ ပြသနာအကြီးအကျယ်တက်လာမည့် အဖြစ်ကို ဦးတည်နေတယ်။
ပြည်တော်ပြန်ပြီး ပြည်တော်ကြီးမှာ အလုပ်မရရင် အလုပ်မဖြစ်ရင် ဘာ နဲ့ ဆက်စားကြမှာလဲ။ ပြည်တော်ကြီးမှာ အလုပ်မဖြစ်လို့ အခြားနိုင်ငံသွားလုပ်နေတဲ့ လူတွေ အများကြီး မဟုတ်လား။ အခုလို အခက်အခဲမျိုး အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွဆိုပြီး အော်ပြီး အောက်ခြေအလုပ်တောင် အလုပ်ရှာ ဖို့ ခက်နေပြန်ရော။
နောက် လူသားခြင်း ဖေးမကူညီတဲ့ စိတ်နဲ့ ယနေ့ ဆန်အိပ်တွေ ထမ်းပြီး လိုက်ဝေငှနေ တဲ့ အဖြစ်ဟာ လည်း စီးပွားရေး ဦးမော့မလာဘူးဆို .. သူဌေးတွေ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ထိခိုက်ရင် အဆင့်ဆင့်ဟာ အကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ ဖြစ်မှာပဲ။ သူတို့ ဘယ်လောက်ထိ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာလဲ?
Covid ဟာ အားလုံးတက်ညီ လက်ညီ တိုက်ထုတ်နိုင် မှ ဖြစ်မယ်။ အချိန်ပေးထားတဲ့ Work from home တို့ lockdown တို့ semi lockdown တို့ကို တန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးမချပဲ လမ်းထွက်နေတာတွေ နဲ့ စည်းကမ်းမလိုက်နာတာတွေဟာ တကယ်တန်း အရှည်ဆန့်သလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အားလုံး သာ တက်ညီ လက်ညီ နေပေးရင် အရင်အတိုင်းပြန်ဖြစ်မယ်။ နို့မို့ဆို ဘဝတွေ အားလုံးဟာ အကုန်ပြောင်းလဲ သွားလိမ့်မယ်။
ဘာအလုပျ မှ မပေးနိုငျတဲ့ ပွညျတျောကွီး နဲ့ အမှောငျဖုံးနတေဲ့ ပွညျတျောပွနျမြား ရဲ့ အနာဂတျ
သိကွမှာပါ .. နိုငျငံခွားမှာ မိသားစု ထဲက တယောကျ အလုပျလုပျရငျ ထိုငျစားလို့ရတယျ ဆိုတဲ့ အဖွဈနဲ့ မှီခိုပွီးနထေိုငျကွတဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးမှာ အခု Covid 19 ပွသနာဟာ ထမငျးလုပျကို ပုတျခလြိုကျတဲ့ အတိုငျးဖွဈလာတယျ။ အဲဒီလို နိုငျငံတှထေဲ နိုငျငံပေါငျးစုံ ပါဝငျတယျ။ အထူးသဖွငျ့ – မိသားစုဝငျတှကေို ရှာဖှကြှေေးမှေး တတျတဲ့ စိတျနဲ့နတေဲ့ ရိုးရာဓလကေို့ အခွခေံတဲ့ နိုငျငံတှဖွေဈတဲ့ လူမှုစီးပှားရေး အားနညျးတဲ့ ဆငျးရဲမှုနှုနျး မြားတဲ့ ဖှံ့ဖွိုးဆဲ နိုငျငံတှမြေားတယျ။
ဥပမာ ဖိလဈပိုငျ တို့ အငျဒိုတို့ ထိုငျး မွနျမာ အိန်ဒိယ ဘငျးဂလားဒရှျေ့ စတဲ့ .. မိသားစုထဲက တယောကျကို နိုငျငံခွားပို့နိုငျရငျ မိဘတှနေဲ့ မှီခိုနတေဲ့ ဆှမြေိုးတှကေို ရှာကြှေးလို့ရတယျ ဘဝအတှကျ စားစရာခိုငျလာမညျ့ လို့ထငျကွတဲ့ အဖွဈနဲ့ နနေတေဲ့ နိုငျငံတှပေေါ့။ အဲဒီနိုငျငံတှေ က အမြားကွီး။ အာဖရိက တောငျအမရေိက အစုံ။ အလုပျတှလေုပျ .. အိမျကို ထောကျပံ့ပေးကွ ပေါ့။ အခုတော့ ပွသနာတှဖွေဈနကွေပွီ။
တကယျတနျး ရငျလေး စရာကောငျးတဲ့ တခကျြဟာ တဆငျ့ပွီး တဆငျ့ တကျလာနိုငျတယျ။ ယနေ့ Trump လို American First ဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ သူတို့နိုငျငံသားတှေ အလုပျပွနျရအောငျ လုပျပွီးမှ အခွားနိုငျငံသားတှေ ဦးစားပေးမညျ့ စိတျတှနေဲ့ ဖွဈလာမညျ့ နိုငျငံတှေ မြားလာလိမျ့မယျ။ အရငျက အလုပျ ကို တတိယနိုငျငံ တှကေ လူတှေ လုပျပလစေ့ဆေိုပွီး – သူတို့ မလုပျခငျြတဲ့ အလုပျတှေ ခိုငျးကွပမေယျ့ အခုပွသနာက နောကျပိုငျး အလုပျမရှိရငျ ရတဲ့ အလုပျဝငျလုပျကွရမညျ့ ကိနျးဖွဈနသေလို .. လကျရှိ ရှိနတေဲ့ လုပျသားခှဲဝမှေုအရ .. တတိယနိုငျငံ ကလူတှေ ဖွုတျပွီး ကိုယျ့နိုငျငံက လူတှနေဲ့ အလုပျလုပျဖို့ ဖွဈလာနိုငျတာပဲ။
ခံရတဲ့ လူတှကေတော့ .. ငါတို့ အလုပျပွုတျ ရတာ သူတို့နိုငျငံသားတှေ ဦးစားပွနျပေးလို့ ဆိုပွီး မွငျကွလိမျ့မယျ။ တဖကျကကွညျ့ရငျလညျး မငျးတို့ အလုပျကို တတိယနိုငျငံက လူတှလောလုပျမှ ဆိုပွီး ခြေးမြားနမေယျ့အစား မငျးတို့ ဘာနဲ့ဆကျစားမှာလဲ .. နိုငျငံက ငှကွေေးလညျပတျဖို့ ကွိုကျကွိုကျ မကွိုကျကွိုကျ လုပျဆိုတဲ့ အဖွဈမြိုးဖွဈ လာနိုငျတယျ။
လတျတလောတော့ အလုပျတှေ ပွုတျကွ .. နောကျ အိမျမှာ ချေါထားတဲ့ အိမျဖျောတောငျ လခမပေးနိုငျ လို့ အလုပျထပျဖွုတျနဲ့ .. အဆငျ့ဆငျ့ .. အလုပျမလုပျရငျ ဘာနဲ့ သှားစားမလဲဆိုတဲ့ ပွသနာ။ နောကျ အလုပျပွုတျ – အလုပျပွနျရှာမရနဲ့ ယခုလတျတလော နာမညျတပျထားတဲ့ ပွညျတျောပွနျတှနေဲ့ သူတို့ကို မှီခိုနတေဲ့ မိသားစု ဝငျတှဟော ပွသနာအကွီးအကယျြတကျလာမညျ့ အဖွဈကို ဦးတညျနတေယျ။
ပွညျတျောပွနျပွီး ပွညျတျောကွီးမှာ အလုပျမရရငျ အလုပျမဖွဈရငျ ဘာ နဲ့ ဆကျစားကွမှာလဲ။ ပွညျတျောကွီးမှာ အလုပျမဖွဈလို့ အခွားနိုငျငံသှားလုပျနတေဲ့ လူတှေ အမြားကွီး မဟုတျလား။ အခုလို အခကျအခဲမြိုး အလုပျဟူသမြှ ဂုဏျရှိစှဆိုပွီး အျောပွီး အောကျခွအေလုပျတောငျ အလုပျရှာ ဖို့ ခကျနပွေနျရော။
နောကျ လူသားခွငျး ဖေးမကူညီတဲ့ စိတျနဲ့ ယနေ့ ဆနျအိပျတှေ ထမျးပွီး လိုကျဝငှေနေ တဲ့ အဖွဈဟာ လညျး စီးပှားရေး ဦးမော့မလာဘူးဆို .. သူဌေးတှေ လုပျငနျးရှငျတှေ ထိခိုကျရငျ အဆငျ့ဆငျ့ဟာ အကြိုးသကျရောကျမှုတော့ ဖွဈမှာပဲ။ သူတို့ ဘယျလောကျထိ ထောကျပံ့ပေးနိုငျမှာလဲ?
Covid ဟာ အားလုံးတကျညီ လကျညီ တိုကျထုတျနိုငျ မှ ဖွဈမယျ။ အခြိနျပေးထားတဲ့ Work from home တို့ lockdown တို့ semi lockdown တို့ကို တနျဖိုးရှိစှာ အသုံးမခပြဲ လမျးထှကျနတောတှေ နဲ့ စညျးကမျးမလိုကျနာတာတှဟော တကယျတနျး အရှညျဆနျ့သလိုဖွဈလာနိုငျတယျ။ အားလုံး သာ တကျညီ လကျညီ နပေေးရငျ အရငျအတိုငျးပွနျဖွဈမယျ။ နို့မို့ဆို ဘဝတှေ အားလုံးဟာ အကုနျပွောငျးလဲ သှားလိမျ့မယျ။